88 New Generation Students: September 2011
Suu Kyi and Aung Kyi to Meet Once Again
By SAI ZOM HSENG Thursday, September 29, 2011
Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi is scheduled to meet Aung Kyi, Burma’s minister of labor and minister of social welfare, relief and resettlement, on Friday afternoon. This will be Suu Kyi’s fourth meeting with officials of Burma’s new government since she was released from house arrest on Nov. 13, 2010.
The meeting will reportedly take place at the Sane Lae Kan Thar state guesthouse in Rangoon at 1 p.m. On Friday, but Nyan Win,aspokesperson for Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD), told The Irrawaddy that no detailed information about the meeting had been announced.
Suu Kyi and Aung Kyi previously met twice this year, once in July and once in August. She also met with Burma’s President Thein Sein in August. Statements issued after each meeting said that both parties were satisfied with the discussions that took place.
There is speculation in the Rangoon-based political community that issues such as the release of political prisoners and the party registration of the NLD will be discussed at the meeting on Friday.
On Tuesday, Burma’s Foreign Minister Wunna Maung Lwin addressed the issue of political prisoners at the 66th session of the UN General Assembly, saying that an early amnesty program is being considered. He also asked the international community to lift the sanctions which have been imposed on Burma.
Aye Thar Aung, the secretary of the Committee Representing the People's Parliament, said that the government must release the political prisoners if they want the international community to lift the sanctions.
Speaking to The Irrawaddy on Thursday, Aye Thar Aung said, “We really hope to see the release of the political prisoners, such as the 88 Generation Student leaders, the ethnic leaders, comedian Zaganar, etc. Although we heard some rumors about the release of prisoners, we can’t confirm yet whether political prisoners are included.”
On Thursday afternoon, there were rumors that Zaganar,awell-known Burmese comedian, and Min Ko Naing,aleader of the 88 Generation Students Group, both of whom are serving long sentences, had been released from prison. But their respective families confirmed that it was justarumor.
Suu Kyi has repeatedly called foradialogue with the Burmese government since her release late last year after more than seven years under house arrest. Her release came just days after Burma held its first elections in two decades.
A retired major general, Aung Kyi heldanumber of meetings with Suu Kyi in the wake ofacrackdown on the monk-led protests in September 2007 that drew widespread international condemnation and brought renewed calls for political reform in the military-ruled country. Observers noted, however, that the talks were chiefly intended to lessen pressure on the regime and never produced any substantive results.
Posted by Thinzar at 05:00
By BA KAUNG Friday, September 30, 2011
Construction of Myitsone Dam project in Kachin State. (Photo: Irrawaddy)
Thein Sein said inaletter to Parliament on Friday that construction of the 6,000-megawatt hydropower dam in Kachin State should be suspended because the project is against the will of the people and lawmakers.
Map of Irrawaddy Dams (Photo: Burma Rivers Network)
In the letter, the president explained that the project has caused much public concern since it can destroy the natural landscape of the Myitsone area and have an adverse effect on the livelihood of the people living downstream of the dam on the Irrawaddy River.
“Our government, being elected by the people, has to take great consideration of public opinion. Accordingly, we have an obligation to respond to the public concern with seriousness. Therefore, we will suspend the Myitsone project during the term of our government,” he said in the letter.
The US $3.6 billion project has drawn widespread condemnation from environmental groups and the Burmese public, as concerns about the potentially disastrous impact of the dam on local communities and the Irrawaddy, Burma's largest river, continue to grow.
Under an agreement signed in 2006 between the Chinese and Burmese governments, China's state-owned China Power Investment (CPI) corporation, inajoint venture with the Burmese Ministry of Electric Power No. 1 and Asia World,aBurmese-owned conglomerate, began construction work on the project last year.
Ninety percent of the electricity generated by the massive project, which has already displaced around 12,000 people, will be exported to China.
It remains unclear what kind of negotiations Thein Sein made with the Chinese government before the announcement was made, but he said in the letter that his government will continue to negotiate and carry out other agreements related to the Memorandum of Understanding on the Myitsone project without hampering friendly relations with the Chinese government.
News of the decision was greeted by opponents of the dam asawelcome development.
“We welcome the president's decision, which reflects what he promised in his inaugural speech—that he will listen to the voice of the people,” said Myat Thu,ademocracy activist in Rangoon who has been organizinganationwide signature campaign calling for the scrapping of the project.
The Myitsone dam, located near the confluence of the Malikha and Maykha rivers at the source of the Irrawaddy, is part ofaseven-dam cascade that representsa$20 billion investment by China, according to the International Rivers Network, an independent environmental group.
The dam's reservoir will submerge important historical and cultural sites and inundate approximately 766 square kilometers of forested area, according to the group, which also said that it will cause irreversible damage to Burma's key river system as well as to downstream rice paddy communities.
Burma Rivers Network, an environmental group, called for continued pressure on the Burmese government and CPI to immediately cancel the six other dams planned on the Irrawaddy source rivers, which will have the same devastating impacts on the country.
“Until the Chinese project holders publicly declare their cancellation of the Myitsone dam and pull out from the dam-site, we must assume the project is going ahead,” said Ah Nan, assistant coordinator of the group inastatement released on Friday.
The project has also exacerbated ethnic tensions in Burma's restive north. The ethnic Kachin Independence Army (KIA) has vowed to resist the project in any form since early this year, when it warned the Chinese government that the project could sparkacivil war and should be canceled.
The warning was followed by deadly armed clashes between the KIA and Burmese government troops near two China-run hydropower plants in Kachin State's Bhamo Township.
La Nan,aspokesman for the KIA, described the president's move asaresult of intense public pressure, but declined to declare itavictory.
“We will wait and see, since it remains uncertain whether the project will be completely canceled or not,” he said.
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ အာဆီယံပါလီမန် အမတ်များညီလာခံ(APIA)တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို အထူးလေ့လာ သည့် နိုင်ငံအဖြစ်မှ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၃၂ ကြိမ်
မြောက် ညီလာခံက သဘောတူ လက်ခံခဲ့သည်။
တပတ်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည့် AIPA ညီလာခံတွင် မြန်မာအမတ်
၁၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ရာ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအမတ် ထက်ဝက်ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ညီလာခံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အရေးတို့ကို မြန်မာက ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
AIPA ညီလာခံနှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ် သိရှိရန် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့သူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်
ရေး ပါတီ RNDP မှ စစ်တွေ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ၂ဝ၁၄တွင် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး မျှော်မှန်းထားပါက မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားရှိသည်ကို ဝန်ခံသင့်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဦးအေးမောင်၏ မြန်မာအပေါ် အာဆီယံသဘောထား၊ အာဆီယံ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနှင့် မြန်မာ သင့်တော် မတော်၊ ထိုရာထူးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို မဇ္ဈိမသတင်းထောက် သဲသဲ မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
AIPA မှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တယ် ဆိုတာလေး အကျဉ်းချုံး ပြောပြပေးပါဦး။
“AIPA မှာက ဆွေးနွေးတာ လေးခုရှိတယ်.၊ ကျနော်က အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကော်မတီမှာ တက်ခဲ့တယ်။
လေ့လာသူ နိုင်ငံတွေက ဖတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို ကြိုဆိုတဲ့နိုင်ငံက များပါတယ်။ ကနေဒါက ပြောတာက နည်းနည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် သုံးတာပေါ့။ သူက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို သုံးတယ်။ Sanction (စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု) လည်း ပါတယ်ပေါ့၊ ဆောင်ရန်လေးတွေ နှစ်ဘက်ကို မျှပြောတာတော့ ကနေဒါနိုင်ငံပေါ့။ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့ ကိစ္စတွေကို သူတို့ဘက်က အမြင်ကို စတိတ်မန့်ထဲမှာ တင်ပြသွား တာပေါ့။ သူ့အမြင်ကို တင်ပြတာကို ဒါကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ပြောရခက်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ လက်ခံ ပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုတာကလည်း ကာလံဒေသံ အခြေအနေအရ ပြန်သုံးသပ်ရမှာကိုး။”
တခြားနိုင်ငံတွေကကော ဘာတွေများ ပြောသွားသေးလဲရှင့်။
“ပါလီမန်တွေရဲ့ ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူရဲ့ အသံ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိဖို့တွေ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့၊
၂ဝ၁၄ မှာ မြန်မာကို အာဆီယံ ရာထူးလွှဲပေးဖို့ ကိစ္စတွေကိုရော ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့သေးလားရှင့်။
AIPA မှာ တင်းပြည့် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ လာမယ့် ၂ဝ၁၄ အာဆီယံ မှာ ဥက္ကဋ္ဌ
ဖြစ်ရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု တစုံတရာရှိမယ်လို့ ယူဆသလား။
“ကျနော်တော့မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြမယ်လေ။ အစက အာဆီယံမှာ မြန်မာက သူ့နိုင်ငံ အခြေအနေကြောင့် မယူရဲဘူး။ အခုယူရဲပြီလေ ယူရဲတဲ့အခါ ပေးရဲရမှာပေါ့။ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ အခါ ဥပမာ- အာဆီယံ နိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတို့၊ ဘာတို့ စံကလေးတွေကို နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေ လာတော့မယ်
လေ။ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ကိုလည်း ကြည့်ကြတော့မယ်လေ။ အစိုးရချင်းကိုလည်း လာကြည့်ကြ အသုံးသပ် ခံကြတော့မယ်။ အပြင်ကကြားတဲ့ အသံထက် တကယ်တမ်း ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ လာရင်တွေ့ကြမယ်။ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် အမြတ်ပဲ ရှိတယ်။ မလုပ်တတ်ရင် ဒီအစိုးရ ရှုံးမှာပဲလေ။”
AIPA ကလည်း အာဆီယံ အဆက်အစပ် အဖွဲ့အစည်းတခုဆိုတော့ အဲဒီမှာ တင်းပြည့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး
နောက်မှာ ဒါက အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ရယူဖို့အတွက် အားမပြုနိုင်ဘူးလား။
“ဘယ်လိုမှတော့ အားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အာဆီယံဆိုတာ ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ နိုင်ငံတွေချည်းပဲလေ သူ့နိုင်ငံနဲ့ သူလာ
ကြတာကိုး။ ဒါက အာဆီယံရဲ့ member တခုဆိုတာ သေချာထားပြီ။ ဒီအတိုင်းဆို အာဆီယံကလည်း ပေးမှာပဲ။ ဒီရာထူးဆိုတာက ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်မှ ယူသင့်တာပေါ့ ။ ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ အင်အား ရှိသလဲ။ အဲဒါတွေက စကားပြောမှာပါ။”
မြန်မာကို ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကော ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်လား၊ ကနေဒါကလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိစ္စ ထပ်ပြောသွားတယ် ဆိုတော့လေ။
“ကျနော့်သဘောကတော့ ပေးသင့်တယ်။ ပြီးရင် လာကြည့်သင့်တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း သူများသွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဒီအစိုးရက ဘယ်လောက် လျှောက်သလဲ ဆိုတာကို ဘေးကနေ ကြည့်နေသင့်တယ်။ မြန်မြန်လေး သွားစေချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရောက်သွားအောင် ပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောချင်တာက
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ရှိတယ်လို့ လက်ခံတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီရဲ့ သဘောထားကို ပြောတာပါ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ရှိတယ် ဝန်ခံပါ။ ကိုယ့်ဘက်က တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်။”
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ အစိုးရလည်း ငြင်းပါတယ်၊ ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
“နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ရှိတာ ဝန်ခံရမယ်။ တိုင်းပြည်ဟာ နောက်ကြောင်း ပြန်မသွားသင့်တော့ဘူး။ ဘာပြုပြင်ဖို့
လိုသလဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ဘာလုပ်ဖို့ လိုသလဲ၊ ပါလီမန်ဟာ ဘာလုပ်ဖို့ လိုသလဲ ကျနော်တို့သိရမယ်။ sanctions
ရုတ်ပါ လို့ အော်နေရုံနဲ့ မပြီးဘူး ။ အစိုးရဟာ သူပြုပြင်သင့်တဲ့ဟာ ပြုပြင်ရမယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာပြုပြင်ဘို့ လိုမလဲဆိုတာကို သိရမယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဘို့လိုမယ် ဝန်ခံဘို့ လိုမယ် ဒါကျနော်တို့ အမြင်ပဲ။ လူသား အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတာရှိရင် လူ့အခွင့်အရေး ရအောင်လုပ်ပေးရမယ် ပါလီမန်ကရော အစိုးရကရောပေါ့”
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုယူဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တခုက ဘာဖြစ်မလဲ။
“၂ဝ၁၄ အတွက် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းရင် အာဆီယံက အကြိုက် ကမ္ဘာက အကြိုက် လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်ဟာ ရာထူးကိုယူမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ တာဝန်ရှိသွားပြီ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားရှိတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံစမ်းပါ။ အဲဒါကျနော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒပါ။”
အခု အန်ကယ်တို့ သွားလေ့လာခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို နည်းနည်း ယှဉ်ပြပေးပါလား။
“ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရင် ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီ။ ကျနော်တို့မှာ resources (အရင်းအမြစ်) တွေ အများကြီးရှိတာ၊
လူဦးရေ ငါးဆလောက် သူတို့ထက်များတယ်။ သူတို့က civil war (ပြည်တွင်းစစ်) အကြီးကြီး ဖြစ်တာ လူ နှစ်သန်း
ကျော် သေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတောင်မှ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို လုပ်နိုင်ရင် ကျုပ်တို့ ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒီလောက်ရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ပြီး တိုင်းပြည်ဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာ။”
ထွန်းထွန်း | သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထိခိုက်မှုများမည်ဟု လူပြောများနေသည့် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းအား ပြည်သူ့ သဘော
ထား အတိုင်း မိမိအစိုးရလက်ထက်တွင် ရပ်ဆိုင်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သောကြာနေ့တွင် လွှတ်တော်များသို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
“မိမိတို့အစိုးရသည် ပြည်သူမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရဖြစ်၍ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို အလေးထား ရပါမည်။ ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလေးထား၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ မိမိတို့အစိုးရလက်ထက်တွင် မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ခြင်းကို မပြုလုပ်စေဘဲ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်” ဟု ၂၉.၉.၂ဝ၁၁ နေ့စွဲဖြင့် လွှတ်တော်များသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာတွင် ပါရှိသည်။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းများကြောင့် “မြစ်ဆုံသဘာဝအလှပျက်စီးခြင်း၊ မြစ်ညှာဒေသ ရေမြုပ်၍ ဒေသခံများ၏ သက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ပုဂ္ဂိလငွေကြေးဖြင့် စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနေသည့် ရော်ဘာနှင့် စိုက်ခင်းများ ပျက်စီးနိုင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပါက ဆည်ပျက်စီး၍ ဆည်အောက်ပိုင်း မြို့ရွာနှင့် ပြည်သူ များ သေကြေ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ် ပျက်စီးနိုင်ခြင်း” များကို ပြည်သူများ စိုးရိမ်နေသည်ကို သိရှိကြောင်းလည်း ပြောဆို ထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်လည်း မိတ်မပျက်စေဘဲ သဘောတူလက်ခံလာအောင် ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတ၏ သဝဏ်လွှာထဲတွင် ပါရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ထိခိုက်မှုများမည်ဟု အများက စိုးရိမ်နေသည့် ဆည်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အနုပညာရှင်နှင့် ဆည်စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး လက်မှတ်ထိုး လှုပ်ရှားနေသူ တချို့ကို မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ထွန်ထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
ဦးလနန် (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - KIO)
“ကျနော်တို့ အဲဒီကိစ္စနဲ့တော့ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးဖို့တော့ စောသေးတယ်ခင်ဗျ။ အခု အားလုံးက တောင်းဆို
နေတာတော့ အစိုးရကာလတခုတည်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရာသက်ပန် အဲဒီဒေသမှာ ရေကာတာ မတည်
ဆောက်ဖို့ ပြောနေကြတာပဲ။ ဒါတောင် အစိုးရကကာလသက်တမ်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သူ့ရဲ့ သက်တမ်းမှာ မလုပ်ဘူးဆိုတာကတော့ ဒါ အာမခံချက် မရှိတဲ့ ကိစ္စပါ။ အခု အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ ကာလ ကျော်လွန်သွားတဲ့ အခါမှ
နောက်လာမယ့် အစိုးရတွေ လုပ်ချင် လုပ်ပလေ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး လမ်းဖွင့်ပေးရင်တော့ မသင့်ဘူးခင်ဗျ။ အခုအစိုးရ အနေနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လူထုအုံကြွမှုကို ခေတ္တခဏ ရှောင်လွှဲတဲ့ပုံစံပါ။ ပြဿနာကို ထိပ်တိုက်မရင်ဆိုင်မိအောင် သတိနဲ့ ရှောင်လွှဲတဲ့သဘောပါ။ ဒါကိုလည်း ပြည်သူတွေကတော့ သုံးသပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒါက ရာသက်ပန် အဲဒီဒေသမှာ Dam တခုကို မဆောက်သင့်ဘူးဗျ။ လူထုတွေ အကုန်လုံး တောင်းဆိုနေတာက အဲဒီကိစ္စပါ”
“တားတဲ့သတင်းကတော့ ကောင်းတဲ့သတင်းပေါ့။ မြစ်ဆုံ Dam ကို ရပ်တယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ရပ်မှာလား၊ ခဏ
ရပ်မှာ လားတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော ကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ်။ လောလောဆယ် ရပ်လိုက်တာ
တော့ ကောင်းတဲ့သတင်းပေါ့။ လုံးလုံးကြီး မလုပ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီ ကချင်ပြည်နယ်က Biodiversity Hotspot။ အင်မတန်ကို ရှားပါးတဲ့ အပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ သစ်ခွတွေ၊ ဆေးဖက်ဝင် အပင်တွေ၊ အကောင်တွေ၊ ငှက်တွေ။ ဒီနေရာမျိုးကို ဘာမှ မထိတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ထပ်ပြီးတော့ မပြောချင်သေးဘူး
ဦးဝင်းတင် (ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်)
“ဒါကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့ အကောင်းဆုံးလဲ
ကျနော်တို့ အဲဒီကိစ္စနဲ့တော့ သဘောထား မှတ် ချက်ပေးဖို့တော့ စောသေးတယ်ခင်ဗျ။ အခု အားလုံးက တောင်းဆိုနေတာတော့ အစိုးရ ကာလ တခုတည်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရာသက်ပန် အဲဒီဒေသမှာ ရေကာတာ မတည်
ဆိုတော့ ကျနော်က ပထမဆုံး ဟိုဒင်းပြုတာ ကတော့ ဒီလို ဟာမျိုးလုပ်ပေးပြီးတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးတော့ ဒီလိုပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်တာဟာ အဲဒါက တခုပေါ့။ အဲဒီသိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က ပြည်သူ
များရဲ့ လိုလားချက်ကို လိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်”
“နောက်တခုကတော့ ဒီမြစ်ဆုံဆည်ဆိုတာက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့က ကျနော်တို့ အသေးစိတ်တော့ မသိသေး ဘူးပေါ့ဗျာ။ သို့သော် ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ဦးဇော်မင်းလို ဝန်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ဆက်
လုပ်မယ်၊ သူများ ဘာတွေပြောပြော ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ အပိုင်ကို ပြောနေတဲ့ဟာတခု ကို ကျော်ပြီးတော့
အခုလို ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကလည်း ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်”
“အဲဒီလို ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေ တိုင်းပြည်မှာ အများကြီး ဒီလို လိုအပ်နေတာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုတာက အကျဉ်းသားကိစ္စတို့ ဘာတို့ စသည်ဖြင့် ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ ကက်ဘိနက်ထဲကနေ သူ့ကို သဘောတူတာတို့၊ တချို့ ကက်ဘိနက်ထဲမှာရှိတဲ့ သူတွေက သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဘာတွေကို ဟန့်တားပြီးတော့ သမ္မတကို ဘာမှမလုပ်နိုင်အောင် လုပ်နေတဲ့ အနေအထား
“အခုကျတဲ့အခါကျတော့ ဒီလို မြစ်ဆုံလို ဧရာမကိစ္စကြီး၊
ပေါ့။ မြစ်ဆုံ Dam ကို ရပ်တယ်ဆိုတာ အမြဲ တမ်း ရပ်မှာလား၊ ခဏရပ်မှာ လားတော့ မသိ ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော ကောင်းတယ် လို့ မြင်တယ်။
နည်းနည်းနောနော ကြီးမားတဲ့ကိစ္စချည်း။ ဒီကိစ္စ ချည်းကို သမ္မတက အခုလို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူ့သက်တမ်း အတွင်းမှာတော့ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောလိုက် ခြင်းဟာ ဒါ အလွန်
ကို ရဲတင်းပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။ တခုပဲ ရှိတယ်။ သမ္မတက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ မလုပ်ဘူး။ ဒါက ငါးနှစ်သက်တမ်းကို ပြောတာဖြစ်တယ်”
“အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် သမ္မတကြီးကို ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးဖို့ ကောင်းတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ နောက် သူ သမ္မတ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လို့ နောက် သမ္မတနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်တဲ့ အခါမှာ
နောက်သမ္မတ သက်တမ်း လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထပ်ပြီးတော့ လွှဲပြောင်းတဲ့ အမှာစကားတွေ ချမှတ်တဲ့ အခါမှာ ဒီအလုပ်ကိုတော့ ဆက်ပြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ နောက်သမ္မတကလည်း မလုပ်ပါနဲ့လို့ သူ့ရဲ့မှာကြားချက်နဲ့ အတူ
နောက်သမ္မတ သက်တမ်းတွေ၊ သက်တမ်းတွေမှာလည်း ထပ်ပြီးတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘဲနဲ့ ဒီကိစ္စဟာ ထာဝရကို ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ ကိစ္စမျိုးဖြစ်သွားအောင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပဲ”
“အောင်ပွဲဆိုတာထက် အောင်မြင်မှုတခုပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
အခုကျတဲ့အခါကျတော့ ဒီလို မြစ်ဆုံလို ဧရာမ ကိစ္စကြီး၊ နည်းနည်းနောနော ကြီးမားတဲ့ ကိစ္စ ချည်း။ ဒီကိစ္စ ချည်းကို သမ္မတက အခုလို ရပ် ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူ့သက်တမ်း အတွင်းမှာ
တော့ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ခြင်းဟာ ဒါ
အလွန် ကို ရဲတင်းပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။ တခုပဲ ရှိတယ်။ သမ္မတက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့သက်တမ်း အတွင်းမှာ မလုပ်ဘူး။ ဒါက ငါးနှစ်သက်တမ်းကို ပြောတာ ဖြစ်တယ်
ဒါက စာမေးပွဲလိုဆိုရင်တော့ ဘာသာရပ် တရပ်ပဲ အောင်တဲ့ သဘောပဲ ရှိသေးတာကိုး။ စာမေးပွဲဆိုရင် ဘာသာစုံအောင်မှ
“ကျနော်တို့ကတော့ ပညာရှင်တွေကော ပြည်သူတွေကော အားလုံး တောင်းဆိုိတဲ့ဟာက အောင်မြင်မှုတခု ရတယ်လို့
ကျနော် ယူဆပါတယ်။ သို့သော် ဒီဟာသည် ယာယီ ရပ်ဆိုင်း တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆိုးကျိုး၊ ကောင်း
ကျိုး လေးတွေကို စနစ်တကျ လေ့လာမှုကိုတော့ မရပ်စေ
ချင်ဘူး။ အဲဒီလေ့ လာမှုကိုတော့ ပညာရှင်တွေနဲ့၊ တကယ်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတဲ့ လူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း တကယ်တော်တဲ့ ပညာရှင်တွေပေါ့လေ။ အဲဒါတွေနဲ့
သေချာကွင်းဆင်းပြီးတော့ မြစ်ဆုံရဲ့ အထက်ပိုင်းကော၊ အောက်ပိုင်းကော လေ့လာဆန်းစစ်မှုပေါ့လေ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်လို့သော်လည်းကောင်း၊ ရေအနေအထားနဲ့ပတ်သက်လို့သော်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေး
လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ရောက်မှုတွေ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကိုတော့ သေသေချာချာ ဆက်လက် ပြီးတော့ မရပ်ဘဲနဲ့ ဆန်းစစ်စေချင်ပါတယ်”
ကျနော်တို့ကတော့ ပညာရှင်တွေကော ပြည်သူ
တွေကော အားလုံး တာင်းဆိုတဲ့ဟာက
အောင်မြင်မှု တခု ရတယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါ တယ်။ သို့သော် ဒီဟာသည် ယာယီရပ်ဆိုင်း တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆိုးကျိုး၊ ကောင်းကျိုးလေးတွေကို စနစ်တကျ
“ဒါက ကိုယ့်နိုင်ငံက စီးပွားရေးသမားနဲ့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး
လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက စီးပွားရေးသမားကတော့ နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိတာကိုး။ အခုဟာကတော့ အခြား
နိုင်ငံ၊ အဲဒီနိုင်ငံကလည်း ရိုးရိုးနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူး။ အင်မတန် အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီအင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်
ဘက်က ရပ်လိုက်ရုံနဲ့ ရှေ့ပိုင်းက သဘောတူထားတဲ့၊ ရှေ့ အစိုးရတုန်းက သဘောတူထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊
ငွေပေးချေမှုတွေ ရှိသေးတာကိုး။ အဲဒါတွေကိုကျတော့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးလည်း မပျက်စေ ချင်ဘူးဗျာ။ သို့သော် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့
ပင်မ အသက်သွေးကြောကြီးကိုလည်း မပျက်စီးစေချင်ဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါကိုတော့ ကျနော် ထင်တယ်။ စနစ်တကျ
နဲ့မှ ရမယ် ထင်တယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေက စာချုပ် ချုပ်ပြီးတော့ ဘယ်လို သဘောတူညီချက်တွေနဲ့
လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ပြည်သူတွေ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားညီလာခံမှာ ချပြဖို့ လိုမယ်”
“လှေကားထစ်တွေကတော့ အများကြီးလိုသေးတာပေါ့နော်။ တထစ်ပြီးမှ တထစ်သွားကြရတာ။ သိပ်လည်း ကြာလို့တော့ မဖြစ်ဘူးလေ။ တထစ် တထစ်ကို တနှစ်လောက်ကြာနေရင်လည်း မဖြစ်သေးဘူးလေ။ ကျနော် တို့ကတော့ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန်ပေါ့ဗျာ။ ထိရောက်မှုဆိုတာက အချိန်လည်း လိုသေးတာ
ကိုး။ ဒါကြောင့် ထိထိရောက်ရောက်၊ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ နောက်ကျန်တဲ့အဆင့်တွေလည်း လျင်လျင်မြန်မြန်
“ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စက တချို့လူတွေက မထွေးနိုင် မအန်နိုင် ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ မထွေးနိုင် မအန်နိုင် ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးကို ဒီတခါတော့ သုံးဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မြိုထားတဲ့အရာက နည်းနည်း ကြီးတာကိုဗျ။ မြိုထားတဲ့အရာကကြီးတော့ အန်ရမယ့်လူကလည်း အန်လိုက်ရင် သူ့ဗိုက်ထဲမှာ ဘာကို စားထားတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားမယ် ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ သူကလည်း မအန်နိုင်၊ နောက်ပြီး မျိုချလို့လည်း မရသေးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုအခြေအနေလို့တော့ ကျနော်က မြင်တာပဲ။ ဒါက ကာတွန်းဆရာတယောက်ရဲ့ အမြင်ပါဗျာ”
ဦးဝင်းချို (မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လက်မှတ်ထိုးကောက်ခံမှု လှုပ်ရှားသူ)
ကျနော်ကတော့ “ဧရာဝတီကျေးဇူး” နဲ့ “မင်း”နဲ့ “ပြည်သူ” ညီညွတ်ပြီလို့ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြည်သူနဲ့ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်လိုတဲ့ ဆန္ဒကို ပြည်သူတွေညီညွတ်စွာနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာပါဘဲ။ အကောင်း ဘက်ကို ဦးတည်တယ်။ ညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတော့ ရှိလိမ့်မပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် သွားရင် ဒီကိစ္စဟာ အခက်အခဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး”
Posted by Thinzar at 04:45
Posted by Thinzar at 04:43
Please see the followings events for updates:
4th Anniversary of Saffron Revolution in Burma Demonstration
Time : 26 September · 13:00 - 14:00
Location : In front of the Burmese Embassy in London, UK
Parying ceremony to mark for the 4th Anniversary of Saffron revolution
Time : 5:00pm to 6:00pm
Date : 26/09/2011 ( Monday)
Venue : Sasana Ramsi Vihara Monastery, Colindale
Founding anniversary of NLD
Demonstration outside Burmese Embassy
Date: 27 September 2011 ( Tuesday)
Venue: In front of Burmese Embassy London UK
( On behalf)
Posted by Thinzar at 05:31
Posted by Thinzar at 04:12
မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာက မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်နေဖို့ လိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်မှုကို ဦးတည်တဲ့ ကနဦး ခြေလှမ်းတွေ စတင် ပေါ်ထွက်နေပြီလို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ Clinton Global Initiative (CGI) နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ် ကလင်တန် ဦးဆောင်တဲ့ CGI ရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ညီလာခံကို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်ကနေ အင်တာနက် Skype ဗီဒီယိုက တဆင့် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် တိုက်ရိုက်မိန့်ခွန်း ပြောဆိုနေစဉ်။
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ် ကလင်တန် ဦးဆောင်တဲ့ CGI ရဲ့ ဒီနှစ် ညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်ကနေ အင်တာနက် Skype ဗီဒီယိုက တဆင့် မိန့်ခွန်း တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ တကယ်လို့ မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာက ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ကမ္ဘာက လေ့လာသိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို သိရှိနေနိုင်ဖို့ သတင်းစာထဲပါတာလောက် ဖတ်ယုံမဟုတ်ဘဲ အဖြစ်အပျက်တွေ နောက်ကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် လိုက်ပြီး ကြည့်နေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ၊ တရုတ်တို့ကို ရည်ညွှန်း ပြောကြားရာမှာတော့ အစိုးရချင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ဖိ်ု့ထက် ပြည်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုပြီး အလေးထားဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကိုနားထောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ၃-ရက်ကြာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီ CGI ညီလာခံကို ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးလောက ခေါင်းဆောင်တွေ အပြင် နိုင်ငံ ၅၀ ကျော်က အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို အာအက်ဖ်အေ အဖွဲ့သား မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
Posted by Thinzar at 04:07
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီဝင် အဖြစ်တင်သွင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး ကော်မတီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုကော်မတီဝင် အဖြစ် ထည့်သွင်းဖို့ ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီ လွှတ်တော်အမတ်က ဒီကနေ့ အဆိုပြုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆက်လက်ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီက ဦးပေါ်လျံလွင်က လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့အရေးကို တင်ပြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရာမှာ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး ဘောင်အတွင်းက ဆွေးနွေးဖို့ တင်ပြချက်ကို တိုင်းရင်းသားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီအနေနဲ့ သုံးသပ်ပြီး ပြန်လည် တင်ပြဖို့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦး က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြအပြီး အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြချက် အပြည့်အစုံကို ဆက်လက် နားဆင်ပါ။
Posted by ngs at 02:45